Article – Page9– Warmae.com
May Myo Eain
မေမြို့အိမ်က အရောင်းရဆုံး ကြက်ကြော်နှပ်ဖက်ထမင်း
မေမြို့ (သို့မဟုတ်) ပြင်ဦးလွင်ကို သင်ရောက်ခဲ့ဖူးပြီလား။ ရောက်ဖူးမယ်ဆိုရင်တော့မေမြို့အိမ်ရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး အင်ဖက်နံ့သင်း ကြက်ကြော်နှပ်ဖက်ထမင်းကို စားဖြစ်အောင်စားဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နော်။
မေမြို့ကို အခုမှပထမဆုံးရောက်တာမဟုတ်ပေမယ့် ဒီကြက်ကြော်နှပ်ဖက်ထမင်းကိုတော့ ဒီတစ်ခါမှစားဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဖက်ထမင်းအကြောင်းစပြောရရင် အရင်ခေတ်က ထမင်းကို ဖက်နဲ့ထုပ်စားခဲ့တဲ့အချိန်တွေကို ပြန်ပြောင်းသတိရစေတယ်။ ထမင်းပူပူလေးကို အရန်ဟင်းအမယ်စုံစုံလေးနဲ့ ကြက်သားကြော်တို့တွဲဖက်စားသုံးရတာမျိုးပါ။
ဒီဖက်ထမင်းထုပ်လေးထဲမှာ ကြက်သားကြော်ကြွပ်ကြွပ်လေးအပြင် ပုစွန်ခြောက်ငံပြာရည်ကြော်၊ပဲကြော်၊ အာလူးကြော်၊ ချဉ်ပေါင်ကြော်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ တကယ်သဘောကျစရာကောင်းတဲ့ ဖက်ထမင်းလေးပါ။ အစားကြီးတဲ့ကိုယ့်အတွက်တော့ ပါတဲ့ထမင်းကို နည်းသလိုခံစားရတယ်။ ကြက်ကြော်အတုံးကတော့ တော်တေ်ာလေးကြီးတယ်။ တစ်ပွဲကို ၂၅၀၀ ကျပ်နဲ့စားရတဲ့အရသာကောင်းတဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး ဖက်ထမင်းပါ။
နောက်တစ်ခုက ကြက်သားကာလသားချက်။ ကြက်ကာလသားချက်ကို နေရာဒေသအလိုက်ပုံစံအမျိုးမျိုးချက်တာကိုစားခဲ့ဖူးတယ်။ မေမြိ့အိမ်က ချဉ်စပါအရသာကြက်သားကာလသားချက်ကိုလည်း အတော်လေးသဘောကျမိတယ်။ အရသာကောင်းပြီးအဓိကဟင်းအနေနဲ့ပါ စားလို့ရနိုင်ပါတယ်။ အရည်အရသာ၊ အသားအရသာ ဘာမှပြောစရာမလိုအောင်ကောင်းပေမယ့်ဆီများတာလေးကိုတော့ သိပ်သဘောမကျခဲ့ဘူး။ ဆီများတယ်လို့ခံစားရရင် စားရတာသိပ်အဆင်မပြေပါဘူး။
ဆိုင်မှာ ထူးထူးဆန်းဆန်းဟင်းပွဲလေးတွေနဲ့ မေမြို့ရဲ့ ဒေသထွက်အစားအသောက်တွေ၊ ကော်ဖီတွေလည်းရနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီဆိုင်က ပြင်ဦးလွင်ရောက်ဖြစ်တဲ့သူတိုင်း တော်တေ်ာများများဝင်လေ့ရှိတဲ့ နာမည်ကြီးစားသောက်ဆိုင်ပါ။ အစားသောက်ကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့သဘောကျမိတဲ့ဆိုင်လေးမို့ နောက်ရောက်ဖြစ်လဲ ဝင်စားဖြစ်ဦးမယ့်ဆိုင်လေးပါ။
Block 9-Nandawon ,MDY-Lashio Road
Phone : 09 795 183392
SAT-SUN 09:00 – 21:00
Golden Sky Restaurant & Bar
, Article, Bar & Grill, Chinese, Thai, Warmae Review
ကဲဒီတစ်ခေါက်မှာ ပဲခူးကဘော်ဒါတွေအတွက် အမိုက်စားစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ သိပ်မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းကမှ ပူပူနွေးနွေးဖွင့်ထားတဲ့ Golden Sky Restaurant & Bar ပါ။
ဆိုင်မှာ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ တရုတ်အစားအစာအစုံရပြီး သောက်မယ့်သူတွေအတွက် Cocktails အစုံ၊ beverage ရနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ စည်ဘီယာလည်းစုံပြီးသောက်ဖို့အတွက် အတော်လေးရွေးစရာများပါတယ်။
ဆိုင်က သုံးထပ်ရှိပြီး အစားအသောက်၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ ကားပါကင်ကျယ်ကျယ်နဲ့သူငယ်ချင်းဘော်ဒါတွေနဲ့ စုထိုင်လို့ကောင်းမယ့်နေရာလေးတစ်ခုပါ။ ပဲခူးမှာလူကြိုက်များတဲ့နေရာလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
No.38, Okthar Myo Thit,7Quater, Yangon – Mandalay Highway road , Bago.
Phone : 09 40152 6758
The Lord – SanChaung
, Article, Bar & Grill, BBQ, Warmae Review
ဒီတစ်ခေါက်လစာတွေလည်း ထုတ်ထားတာဆိုတော့ သောက်ကြစားကြမယ့်ဘော်ဒါတွေအတွက် ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရေးပေးချင်ပါတယ်။ ရှင်စောပုလမ်းက ဖွင့်ထားတာသိပ်မကြာသေးတဲ့ The Lord စမ်းချောင်း ပါ။
The Lord ရန်ကင်းဆိုင်ကိုသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီး တကယ်တမ်းအရင်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တာကရှင်စောပုကအသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ ဆိုင်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။ ဆိုင်အနေအထားကျယ်ဝန်းပြီးဆိုင်အသစ်ဖြစ်တာကြောင့်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုကတော့ အတော်လေးကောင်းမွန်တယ်။ ဆိုင်ပုံစံကလည်း တော်တေ်ာလေး fine တယ်။
အမြည်းတွေစုံပြီး ဘော်ဒါတွေစုပြီးသွားသောက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ အသားနူးအိတဲ့ ဝက်သားပေါင်းကိုတော့တော်တော်လေးသဘောကျတယ်။ စားလိုက်တိုင်းမှာ နူးညံ့တဲ့အရသာကိုရတယ်။ မကြိုက်တဲ့တစ်ချက်က တချို့သုံးထပ်သားဟင်းတုံးမှာ အမွှေးလေးတွေကျန်နေတာကိုသိပ်သဘောမကျပါဘူး။ ကျန်တဲ့အရသာပိုင်းကတော့ လုံးဝအိုကေပါတယ်။
လူအရမ်းများပြီး မှာထားတာကို ခဏခဏသတိပေးနေရတာလေးတစ်ခုလည်းသိပ်တော့ဘဝင်မကျပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ပြောပလောက်တဲ့ ပြသနာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အချုပ်အားဖြင့်ပြောရရင် ထိုင်လို့ကောင်းတယ်။ လူအရမ်းများပေမယ့်ဆိုင်ပုံစံကောင်းတာကြောင့် ပိတ်လှောင်နေတာမျိုးမရှိပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေဘီယာဆိုင်စုထိုင်ဖို့ သွားသင့်တဲ့ဆိုင်လေးပါ။
No.11, Shin Saw Pu Road, Near Baho Road, Sanchaung Township
Phone : 09 785 101433
တစ်မြို့ လုံးမှာတစ်ဆိုင်ပဲတွေ့ဖူးသေးတဲ့ ရှုးရှုဲချဉ်စပ် ချင်းမိုင်မုန့်တီ
ရခိုင်မုန့်တီသောက်ရတာ နည်းနည်းငြီးငွေ့နေပြီဆိုရင် ရန်ကုန်မှာ တစ်ဆိုင်တည်းရတဲ့ချင်းမိုင်မုန့်တီကို မြည်းစမ်းကြည့်ပါ။ တောင်မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်းက Golden Crab ဆိုတဲ့ ထိုင်းဆိုင်မှာ ဖွင့်ထားတာပါ။တခြားပင်လယ်စာတွေ၊ ထိုင်းအစားအစာတွေ အရသာအရမ်းကောင်း၊ ဈေးလည်းအသင့်အတင့်ပဲ။ ဆယ်လီတော်တော်များများလည်းလာစားတယ်။ သိပ်မတင်ကြလို့သာနာမည်အရမ်းမကြီးတာဆိုင်က ဟင်းတွေရဲ့ အရသာကတော့လေ …အိုး..ဘာပြောကောင်းမလဲ ..ရှယ်ပဲ
အဲ့မှာ မိန်းကလေးတွေအရမ်းကြိုက်ကြတဲ့ အမယ်တစ်မျိုးရှိတာက ချင်းမိုင်မုန့်တီပဲ။
ပုံမှာပါတဲ့ တစ်ပွဲလုံးကိုမှ ထောင့်ငါးရာပဲ။ ကြက်သား၊ဝက်သား၊ပင်လယ်စာရတယ်။ အသားဖတ်တွေကလည်း များတယ်။ သူ့ဈေးနဲ့ထည့်ပေးထားတဲ့အသားဖတ်က တန်တယ်ပြောရမယ်။ အရသာက ဟင်းရည်ကအသက်ပဲ အဖက်က ထိုင်းမုန့်တီထောင်းက မုန့်ဖတ်နဲ့ထည့်ချက်ထားတာ။ အရသာက ရှုးရဲှဲ၊ချဉ်စပ် ကိုမှ အထဲမှာ ရုံးပတီသီးလှီးတာရယ်၊ ခရမ်းကျွတ်သီးဖတ်လေးတွေရယ်။နံနံပင်မွှေးမွှေးလေးနဲ့ ရောချက်ထားတာ။တွဲစားဖို့အတွက် ငရုတ်ရည်တစ်ခွက်ပေးတယ်၊ အချဉ်ကြိုက်ရင် သံပရာသီးတစ်စိတ်ပေးထားတယ်။
မြေအိုးလေးနဲ့ လာချပေးရင် အငွေ့တထောင်းထောင်းနဲ့ မုန့်တီကိုဖွင့် နံနံပင်မွှေးမွှေးလေးမှာ သံပရာသီးလေးညှစ်၊ ငရုတ်ရည်လေးထည့်စားရင် လောကကြီးကို မေ့သွားမလားအောက်မေ့ရတယ်။ ချင်းမိုင်မုန့်တီဆိုပေမယ့် ရခိုင်မုန့်တီလို သိပ်မငန်ဘူး ။ အရသာက အသားပြုတ်အရသာအချိုရယ်၊ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်အရသာလေး။အဲ တစ်ခုရှိတာက သူကနဂိုချက်ကတည်းက နည်းနည်းစပ်တော့ အစပ်မကြိုက်ရင် သူ့နဂိုအရသာ အတိုင်းစားရင် အကုန်အနေတော်ပဲ။ ကိုယ်တွေက အစပ်အရမ်းကြိုက်တော့လား..ပေးထားတဲ့ ငရုတ်သီးရည် တစ်ခွက် အကုန်ထည့်စားပီးရင် နှာရည်တွေကျ ရှုးရှဲနဲ့ ပွင့်ထွက်သွားရောပဲ။ စစချင်းစားတဲ့သူတွေက မကြိုက်လောက်ပေမယ့် နောက်တစ်ခေါက်ထပ်စားကြည့် ကြိုက်သွားစေရမယ်။ အစ်မတစ်ယောက်ဆို စစချင်း အစိမ်းကြီးကျနေတာပဲဘာညာနဲ့ စားကြည့်ပြီးမှ သူလည်းကြိုက်သွားတာ။
ထိုင်းရောက်ပြီးတာတောင် အဲ့တာကို ရှာစားတာ ရှာလို့ မတွေ့သေးဘူးအခုထိ။ နောက်အချိန်သိပ်မရလို့ သဘောၤသိးထောင်းစားခဲ့တယ်။ ပင်လယ်စာသဘောၤသီးထောင်းဆိုတာကလည်း ၁၅၀၀၀ကို ပင်လယ်စာတွေ အများကြီးနဲ့ အရမ်းကောင်းတာ။ တုံယမ်းဟင်းရည်တို့ ဘာတို့လည်းရတယ်။ လမ်းကြုံရင် အဲ့ဒါလေးစားကြည့်နော်။ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်ကြိုက်တဲ့သူတွေ try ကြည့်ဖို့ ရှုးရှုဲချဉ်စပ် ချင်းမိုင်မုန့်တီအကြောင်းကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
No 28, South Horse Racing Course Road, Tarmwe, Yangon.
Phone : 09 731 39172
အဝစားဆိုင်တွေရောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေစုံလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခါတရံမှာ အစားတွေကို လိုတာထက်ပိုပြီး စားမိတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာနေရထိုင်ရတာ သက်တောင့်သက်သာမရှိတော့ပဲ ပြည့်အင့်အင့်အီလည်လည်ကြီးဖြစ်နေတတ်ကြတယ်။အစာကြေဆေးဆောင်ထားရတဲ့သူမျိုးတွေလည်း တွေ့ဖူးကြမှာပေါ့။ ဒီတစ်ခေါက်မှာ အဲလိုဖြစ်တာတွေကိုပြန်ဖြေဖို့အတွက် နည်းလမ်းလေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
လိမ္မော်သီးက ဗီတာမင်စီ အများစုပါဝင်ပြီး ချိုချဉ်အရသာရှိလို့ အအီပြေစေနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆီဓာတ်ကိုပြန်လည်ဖြေလျှော့ပေးနိုင်ပါတယ်။ လိမ္မော်ရည်လေးသောက်ပြီး အချိုတည်းတာဖြစ်ဖြစ် လိမ္မော်သီးလေးစားလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်အအီပြေစေနိုင်ပါတယ်။
လက်ဖက်စိမ်းရေနွေးကြမ်းက ကိုလက်စထရောကျစေတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ အစာတွေအစားများပြီး နေလို့မကောင်းဖြစ်ရင်လက်ဖက်စိမ်းရေနွေးကြမ်းသောက်လိုက်ရင် သွေးတွင်းကိုလက်စထရောကိုပမာဏကို လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အံ့သြစရာအချက်ကသွေးဖိအားကိုလည်း ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်စေပါတယ်။
အငံအစားအသောက်တွေစားပြီး ရေငတ်နေတာမျိုးဖြစ်ရင် ငှက်ပျောသီးစားပေးပါ။ ငှက်ပျောသီးက ကိုယ်တွင်းခံစားရတဲ့အငံဓာတ်တွေကို လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ သွေးဖိအားကိုလည်း လျော့ကျစေပါတယ်။
ဒိန်ချဉ်က အစားများလို့ဖြစ်တတ်တဲ့ နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းတဲ့ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒိန်ချဉ်က အူတွင်းဘက်တီးရီးယားတွေကို ထိန်းပေးနိုင်ပြီး လေနဲ့ဝမ်းပြသနာကိုလည်း ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာဖြစ်စေ၊ ကြောင်အိမ်ထဲမှာဖြစ်စေ အစားအစာတွေကို
အလွယ်တကူ သိမ်းဆည်းလေ့ရှိကြပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ သင်သတိမထားမိသေးတဲ့
အတူမထားသင့်တဲ့ အစားအစာတွေအကြောင်းကို သိမှတ်ထားနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကြက်သွန်နီနဲ့ အာလူးက ဟင်းချက်ရာမှာပြသနာမရှိပေမယ့် အတူတွဲသိမ်းဆည်းမယ်ဆိုရင်တော့
မကောင်းပါဘူး။ ကြက်သွန်ကြောင့် အာလူးကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ အတူတွဲမထားသင့်ပါဘူး။
ခရမ်းချဉ်သီးကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာထားခြင်းက အရသာကိုပျက်စီးစေပါတယ်။ အချိန်အကြာကြီး
ထားမိရင် ဓာတ်ပျက်နိုင်တာကြောင့် ခရမ်းချဉ်သီးကို အပြင်မှာထားတာက ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
ပန်းသီးကို ကြာကြာခံစေချင်ရင် ရေခဲသေတ္တာလို အေးတဲ့နေရာမှာထားတာပိုကောင်းပါတယ်။ လိမ္မော်သီးကိုတော့ပန်းသီးနဲ့နေရာခွဲထည့်ပါ။ ပန်းသီးနဲ့လိမ္မော်သီးက အတူတွဲမထားသင့်တဲ့ အသီးအနှံတွေပါ။
မုန္လာဥ၊ ၾကက္သြန္နီတို႔ကို အိတ္နဲ႔သိမ္းဆည္းပါ
ၾကက္သြန္နီ၊ မုန္လာဥတို႔ဆိုတာက ေျမႀကီးထဲကဥပါတဲ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အမ်ိဳးအစားေတြျဖစ္ပါတယ္။
အာဟာရဓာတ္ေတြမဆံုးေအာင္၊ ဓာတ္မပ်က္ေအာင္ ေအးျမစိုထိုင္းတဲ့ေနရာမွာပဲ ထားသင့္ပါတယ္။ စကၠဴအိတ္နဲ႔
ပတ္ၿပီး သိမ္းဆည္းလို႔ရပါတယ္။ ေရခဲေသတၱာထဲထည့္သိမ္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပလတ္စတစ္အိတ္သံုးႏုိင္ပါတယ္။
The amazing benefit of carrots
ဒီထက်ပိုလှပပြီး ကျန်းမာချင်တယ်ဆို မုန်လာဥနီပုံမှန်စားပါ
အရသာချိုချိုလေးနဲ့ ကြွပ်ကြွပ်ရွရွမုန်လာဥကို လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ မုန်လာဥနီကို အသီးအနှံတွေနဲ့ရောပြီး အစိမ်းကြော်နဲ့စားသလို အစိမ်းတို့စားပုံတစ်နည်း ဖျော်ရည်အဖြစ်တစ်ဖုံ မျိုးစုံ စားသုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မုန်လာဥနီရဲ့ အကျိုးပြုပုံနဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို သိရှိတဲ့သူနည်းပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာ မုန်လာဥနီ စားသုံးခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်း ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ကိုလက်စထရော များနေခြင်းဟာ နှလုံးရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မုန်လာဥနီ ပုံမှန်စားသုံးခြင်းဟာ ကိုလက်စထရောကို ကျဆင်းစေတာကြောင့် နှလုံးကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။
အမျှင်ဓါတ်တွေ ပေါများစွာပါဝင်တဲ့မုန်လာဥနီကို စားသုံးခြင်းဟာ အစာခြေစနစ်ကိုလည်း ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ နောက်တစ်ခုအကျိုးပြုတာက Vitamin C ပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေကို ကြည်လင်တောက်ပစေပါတယ်။ မွဲခြောက်ခြောက်အသားအရည်မဖြစ်ချင်ရင်တော့ မုန်လာဥနီကိုသာ ပုံမှန်လေးစားသုံးပေးပါ။
အထူးသဖြင့် မုန်လာဥနီနဲ့ပတ်သက်လို့ လူသိများတဲ့အချက်ကတော့ မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုတာကိုပါ။ မုန်လာဥနီမှာ ပိုတက်စီယမ် များများစားစား ပါဝင်ခြင်းဟာ သွေးပြန်ကြောနဲ့ သွေးလွှတ်ကြော တင်းမာမှုတွေကို ပြေလျော့စေပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကို အားကောင်းစေတဲ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်တလျောက် သွေးစီးဆင်းမှုကိုလည်း တိုးတက်စေပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းမွန်တာကြောင့် ရုတ်တရက် လေဖြန်းတာနဲ့ လေဖြတ်တာတွေလည်း မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။
အလှအပဆိုတာ ပင်ပင်ပန်းပန်း ရှာဖွေဖန်တီးနေစရာမလိုပါဘူး။ နေ့စဉ်စားသောက်နေတဲ့ အစားအစာတွေကို စနစ်တကျနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်အောင်စားမယ်ဆိုရင် ဒီထက်ပိုလှပပြီး ကျန်းမာတဲ့ဘဝတစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။